आइसोलेसनमा २ वर्षीया बालिकाको मृत्यु, रिपोर्ट अझै आएन - Everest Dainik - News from Nepal
बाजुराः बाजुरामा आइसोलेसनमा भर्ना गरिएकी २ वर्षीया बालिकाको मृत्यु भएको छ ।
बाजुरा जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना भएकी २ वर्षीया बालिकाको आइतबार बिहान मृत्यु भएको अस्पतालका प्रमुख डा. रूपचन्द्र विकले जानकारी दिए ।
ती बालिका यही जेठ १० गते बुवा, आमासहित भारतबाट फर्किएर बूढीगंगा नगरपालिका–१ स्थित क्वारेन्टाइनमा बसेकी थिइन् ।
याे पनि पढ्नुस शनिबार साँझ थप २७ जनामा कोरोना संक्रमण
त्यस क्रममा ज्वरो, झाडापखालाका साथै श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखिएपछि ती बालिकालाई जेठ १५ गते आइसोलेसनमा ल्याइएको थियो । उनका बुबा र आमालाई पनि अस्पतालको आइसोलेसनमै राखिएको छ ।
विश्वकर्माका अनुसार १६ गते बालकको थ्रोट स्वाबको नमूना संकलन गरी परीक्षणका लागि धनगढी पठाइए पनि रिर्पोट भने आएको छैन ।
याे पनि पढ्नुस कोरोनाबाट मृत्यु भएकी महिला कुन–कुन अस्पताल गएकी थिइन् ?
कोभिड–१९ रिपोर्ट आएपछि मात्र शव व्यवस्थापन गरिने अस्पतालले जानकारी दिएको छ ।
ट्याग्स: Corona Nepal, आइसोलेसन, काेराेना भाइरस, बाजुरा जिल्ला अस्पताल, मृत्यु